फोक्सोलाई स्वस्थ्य राख्ने डा. भगवान कोइरालाका दश टिप्स | सुप्रीम खबर
२०७८ बैशाख २५, शनिबार, ४: १७PM
काठमाडौं– मुटु रोग विशेषज्ञ हुन्, डाक्टर भगवान कोइराला। अहिले कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै समस्या फोक्सोमा देखिने गरेको छ।
फोक्सो कसरी स्वस्थ्य राख्ने, डा. कोइरालाका १० टिप्स यस्ता छन्।
जस्तै हरियो सागपात, भटमास, अण्डा, रातो सिमि, गाजर, पालुन्ग्गो, सिमला खुर्सानी आदी खानु होला ।
ग्यास चुल्हो, स्टोभ, बलिरहेको मैनबत्ती वा टुक्की, दाउरा बालिरहेको ठाउँबाट, ग्यास हिटर आदी धुवा निकाल्ने ठाउँबाट कम्तिमा ५ फिट टाढा बस्ने । दाउरा बालेर खाना पकाउने अवस्था र धुवा आवातजावतको अवस्था ठिक नभएमा खुल्ला ठाउँमा खाना बनाउने । मुख्य कुरा हरेक प्रकारको प्रदुषण र धुँवाबाट टाढा रहने ।
१०) श्वास फेर्न कठिनाई वा छाती दुख्ने जस्ता लक्षण महशुस भएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा सम्पर्क गर्नु पर्दछ ।
अघिल्लो लेखमाउच्च अदालत पाटनमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षकको शव फेला
अर्को लेखमाकैलालीमा एकै दिन ९ जना संक्रमितको मृत्यु